War yaab leh, nin qaba xanuunka dhimirka oo loo dilay aano qabiil – SOOMAALPEDİA
War yaab leh, nin qaba xanuunka dhimirka oo loo dilay aano qabiil
Posted on May 11, 2016 by SOOMAALPEDİA
Dhibanaha oo gaari BL ahaa laga saaray Deegaanka Shalambood, kuna sii jeeday Magaalada Marka, ayaa waxaa wadada u galay gaarigaasi maleeshiyaad hubeysan, kuwaa oo xoog gaariga ugala degay ninkii xanuunsanaayay.
Maleeshiyadan oo gaariga ku joojisay Deegaanka Buufow oo qiyaastii 3km u jirta Magaalada Marka Ee Xarunta Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa isla Deegaankaasi Buufow ku toogtay ninkaasi.
Gudoomiyaha Deegaanka Shalambood, Nuur Cismaan Raage oo ka hadlay dilka ninkaasi, ayaa wuxuu ku tilmaamay fal aad u fool xun, kana dhan ah bani’aadanimada.
Gudoomiyaha oo magaca ninkaasi ku soo koobay Faarax, ayaa wuxuu sheegay inuu ahaa nin xagga madaxa looga jiray, isagoo intaa ku daray in laga garanaayay Shalambood.
Isagoo la hadlaayay Warbaahinta gudaha, ayuu ku celceliyay inaanan loo baahnayn dilalka aanooyinka beelaha la xiriira, iyadoo beelaha isku haaya Gobolkaasi Shabellaha Hoose uu ugu yeeray inay ka waan-toobaan dhexdooda.
Laba ka mid ah beelaha wada degga Gobolkaasi, ayaa waxay caadeysteen inay joogteeyaan xiisadda u dhaxeyso, iyadoo marka xal loo helaba, ay beel ka mid ihi fashiliso.
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan, ayaa wuxuu Ururka Al Shabaab uu ku eedeeyay mid iska horkeenaaya beelaha wada degga Gobolka Shabellaha Hoose.
War culus: Sh.shariif & Faroole oo isku raacay hal arin oo ku saabsan 2016..
Degdeg: Nacaybka Keenya ee Soomaalida oo laba kacleeyay